Igwe eji ede ihe ugboro abụọ
Igwe kwụ ọtọ Line Edging Machine
Igwe ihe ngere iko
Igwe kwụ ọtọ pensụl edging igwe
Igwe ncha iko
Igwe mkpọpu mmiri iko
Igwe na -akpụzi igwe
Igwe nhazi nkume
Ihe ngosi China (Shanghai) International Glass Industry Industry kwụsịrị nke ọma
Site na Mee 6 ruo 9, 2021, ihe ngosi ihe nkiri iko mba ụwa nke China (Shanghai) kwụsịrị nke ọma n'Ụlọ ngosi ihe ngosi nke Shanghai. Dị ka a maara nke ọma soplaya nke agadi ọkachamara iko ígwè ngwaahịa, Sunkon Intelligent Technology CO., LTD ifịk participa ...
Nzukọ nzukọ ahịa nke Sunkon 2021
Sunkon nwere ọgbakọ ọrụ ahịa 2021 n'isi ụlọ ọrụ ahụ na Machị 2, 2021. Ndị isi ụlọ ọrụ na ndị na -ahụ maka mpaghara gara nzukọ ahụ. Na nzukọ ahịa a, anyị chịkọtara ọrụ azụmaahịa na 2020, wee mee atụmatụ ọrụ ịre ahịa yana isi ihe nkenye ...
Nyocha nke ngwa nke teknụzụ nhazi iko
site na nchịkwa na 21-03-02
Ngwa nhazi iko na -arụtụ aka na igwe enyo nke na -eme usoro nhazi na iko a na -emezughị iji gboo mkpa nke ụlọ ọrụ dị iche iche. Teknụzụ nhazi iko iko a na -ahụkarị na ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ịcha iko, ịde ihe, ịchacha, l ...
Ihe omuma nke iko
Banyere echiche iko iko, a na -akpọkwa Liuli na China oge ochie. Iko na -anọchi anya mkpụrụedemede ndị China nke Japan. Ọ bụ ihe siri ike na -enwu enwu nke na -etolite usoro netwọkụ na -aga n'ihu mgbe agbazere. N'oge jụrụ oyi, viscosity nwayọọ nwayọọ ...
Otu esi ejigide igwe kwụ ọtọ na -edezi igwe si SUNKON Glass Machinery co., Ltd
1. Tupu ịmalite igwe SUNKON Glass, biko lelee ọnọdụ mmebi wiil ma ọ bụ gbanwee ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Hụkwa ọnọdụ oghere ịgba ebe ọ bụla mgbe agbanwere wiilị. 2. Igwe kwesịrị ịdị na-agba nkeji 5-10 n'enweghị iko tupu ịhazi t ...
Ụdị igwe eji akpacha iko iko a na -ejikarị eme ihe
1. Igwe igwe igwe kwụ ọtọ mgbe ị na -akpachapụ anya: ọrụ igwe na -edezi ahịrị kwụ ọtọ bụ site n'ihu na azụ efere na -ejikọ enyo ma na -anyagharị ngagharị ngagharị ya, ojiji ga -elebara anya na isi ihe abụọ: ① Tupu na mgbe efere nrụgide na okporo ụzọ ụgbọ oloko. elu elu ruo mgbe niile ...
Mmepe igwe na -ahụ maka iko iko China ka ezughi oke
Site na mmepe nke ụlọ ọrụ na -emepụta iko iko kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ iko ga -eji nwayọọ nwayọọ ghọọ ụdị mmepụta otu wee mepụta ikike imepụta oke. Ahịrị mmepụta nke igwe 10 ma ọ bụ karịa nke igwe na -eme karama mmiri nwere njikwa oge elektrọnik ga -eche nnukwu ahịa ...
Okwu:Nọmba 20-8 nke Ngosipụta Ihe Ntụrụndụ Osisi Mba Nile nke Lunjiao, Lunjiao Town, Shunde District City, Guangdong Province, China.
Nkume Nkume 45 Degree Machine, Igwe Miter Glass, Ngwa ụlọ Glass Edging Machine, Igwe eji edezi Nkume 45, Igwe na -agbanwe igwe na -agbanwe agbanwe, Ngwongwo Nkume Nkume,